Ismaaciil Ibraahim Hassan | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Bartamihii sebteembar 2020 waxaa heshiis laga gaaray doorashada dalka 200/2021 kadib kulan dhex maray Madaxda DFS & DG oo horay wada-xaajood saddex heer maray ku yeeshay Magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug. Dhuusamareeb (3) kama aysan qayb gelin Madaxda DG Puntland & Jubbaland, waxa ay taasi keentay in ay diidaan natiijada heshiiska ay saxiixeen Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, Madaxda DG Galmudug, Hirshabeelle, Koofur Galbeed iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir. 1-dii Sebteembar 2020, Magaalada Muqdisho waxaa soo gaaray Axmed Madoobe & Saciid Deni si ay ula kulmaan Madaxweynaha JFS Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, maadaama ay diideen qodobada lagu heshiiyay Dhuusamareeb (3). …
Dowladdii kacaanka oo curatay 21-kii Oktoober, sannaddii 1969 ayaa ahayd middii ugu waqtiga dheereyd ee soo marta Soomaalida. Afgambiga wuxuu ka dambeeyay dilkii madaxwaynihii Soomaaliya, Cabdi Rsahiid Cali sharma’arke, ee 15-kii bishii October sannaddii 1969 oo lagu dilay magaalada Laascaanood. Markii uu dilkaasi dhacayay waxaa dalka Raisul wasaare ka ahaa allaha u naxariistee Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal. Cigaal waxaa xilligii uu dilka dhacayay uu ku sugnaa magaalada New York oo uu uga qayb galayay shirkii Qaramada Midoobay, wuxuuna markii uu dilka maqlay uu si degdeg ah ugu soo laabtay dalka. Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal markuu dalka ku soo laabtay wuxuu …
14 Oktoobar Waxay Ummada Soomaaliyeed u Ahayd Maalin Mugdi Leh
Ismaaciil Ibraahim Hassan, October 14, 2020
Maanta saddex sano ayaa laga joogaa markii uu dhacay qaraxii Soobe ee sababay dhimasho, dhaawac, burbur hantiyeed iyo weynta dad lagu tiriyay liiska Geerida balse aan la helin raq iyo ruux! Dadkii goobjooga u ahaa maalintaas qaraxii dhacay oo qaarkood dhaawac jireed & Mid maskaxeed soo gaaray ayaa Warbaahinta u sheegay in xusuustooda aysan ka go’in wixii maalintaas dhacay. Qaraxa ayaa dhacay xili uu isgoysku aad mashquul u ahaa, Gawaarida ayaa isku xirantay, dadka ayaa lugeynayay waddada, Goobaha Ganacsiga waa ay furnaayeen, dadku waxa ay ku kala mashquulsanayeen danahooda gaarka ah. Muqdisho xiligaas kuma cusbeen qaraxyada, balse waa uu ka …
Madaxweyne farmaajo muxuu kaga duwanaan karaa madaxdii hore ee dalka soomaray? Dowladihii kumeel gaarka ahaa ee lagu soo dhisay magaalooyinka Carta Nairobi iyo Jibouti, 17sano ka dib waxaa la doortay 8dii febraayo 2017 madaxweyne Maxamed Cabdilaahi farmaajo. Waxaana doorashadiisii soo dhaweeyey kuna farxay dadyow fara badan iyo qaybaha kale ee bulshada, waxaana madaxweyne farmaajo ficilkiisa ugu horeeyo lagu tilmaami karaa isagoo heysto taageero shacab tii ugu badnayd oo uu kaga duwanyahay madaxdii asaga ka horeysay hogaanka dalka. Hadaba Madaxweyne farmaajo muxuu uu farqi ahaan kaga duwanaan karaa madaxdii ka horeysay? Mudane Maxamed Cabdilaahi farmaajo waxaa dhaqan ahaan lagu tilmaamaa in …
Maqaalkan qoraaleed waxa aan ku tibaaxi doonaa hakadkii dhawaan lagu sameeyey madaxdii hore ee dalka Soomaaliya, hakadkaasi oo ahaa safar ay masuuliyiintan doonayeen in ay ku booqdaan fatahaadaha ka jira magaalada Baladweyne. Waxaa mudo dhowr saacadood ah lagu xanibay Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sh. Axmed oo labaduba ah madaxdii dalka soomaray ee 8deedii sano ugu dambeyay xukunka wadanka majaraha u hayay waxaana buuq iyo is jiid-jiid daba dheeraaday ka dib loo fasaxay madaxdan in ay tagaan magaalada Baladweyne hadana inta ay diyaaraddaasi hawada ku jirtay waxaa dhacday in duuliyihii diyaarada waday lagu amray in uu dib usoo laabto sababo …
Waa qormo kooban oo aan kaga hadli doono macnaha uu xambaarsanyahay magaca Madaxweyne si aragtiyan ah. Madaxweyne waa kan leh hoggaaminta guud ee wadankasta uu leeyahay, kaa soo loo yaqaan “madaxweyne”. Hadaba Soomaalideenu ereygan jaceyl ay u qabaan ayaa dhacday in nin waliba uu tartan u galo siddii loo oran lahaa “Madaxweyne”. Waana mida keentay in dalka Soomaaliya uu noqdo mid federaal laga dhigo, hase yeeshee arintan federaalka waxay dhalisay waxyaabo dib u dhigi kara wadajirka iyo qaranimada wadanka Soomaaliya. Macnaha maamul goboleed Waa arinta aan rabo inaan isku dhiskeeda ku cadeeyo taasoo u muuqato in macnihiisu tahay shaarkii jabhadeysiga …